ထုတ်ကုန်များ > 6-Bromoquinazolin-2(1H)-one (162012-72-8)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (162012-72-8) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
MDL အရေအတွက် MFCD08458441
InChI Key ကို ZHLRYPLSYOYNQM-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 192.174
အပြုံး COC1 = ကို C (ကို C = C2C (= C1) ကို C (= အို) N ကို = CN2) အို
အရည်ပျော်မှတ် 220-313 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (162012-72-8) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
6-Bromoquinazolin-2 (1H) ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကြေညာချက် -one:
♦အရေပြားပေါ်မှာ IF: ဆပ်ပြာနဲ့ရေများများနှင့်အတူဆေးကြောပါ။
ရှိုက်လျှင်♦: လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေမှသားကောင် Remove နှင့်အသက်ရှူဘို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွင်ကြွင်းသောအရာမှာစောင့်ရှောက်လော့။
♦လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေမှသားကောင် Remove နှင့်အသက်ရှူဘို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွင်ကြွင်းသောအရာမှာစောင့်ရှောက်လော့။
♦ဒေသခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီမှအကြောင်းအရာများကို / ကွန်တိန်နာများစွန့်ပစ်ခြင်း။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one (162012-72-8) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 6-Bromoquinazolin-2(1H)-one (162012-72-8)
Apicmo မှာကျနော်တို့အကြီးစားထုတ်လုပ်မှု, ပေါင်းစပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူအများကလေးစား client များအတွက် 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One များထုတ်လုပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များတင်းကြပ်စွာလက်ရှိ Good Manufacturing Practice (CGMP) ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖွင့်မယ့်အရည်အသွေးပြည့်စနစ်ဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သငျသညျသုတေသနသို့မဟုတ်စက်မှုဇုန်အသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ဝင်း၏အချိန်မီပေးပို့များအတွက်အပေါ်အားကိုးနိုင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-တဦးတည်းလည်း 7-hydroxy-6-methoxy-1, 4-dihydroquinazolin-4-One (IUPAC အမည်) အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်, 7-hydroxy-6-methoxy-1H-quinazolin- 4-One (IUPAC ရိုးရာအမည်) သို့မဟုတ် 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one ။ ဒီထုတ်ကုန်အားပေးပြီးမှသည်အခြားအမည်များ4(3H) -QUINAZOLINONE, 7-hydroxy-6-METHOXY- နှင့် 7-hydroxy-6-methoxyquinazolin-4 (1H) -one ပါဝင်သည်။
CAS number ကို 6-7-4 နှင့်အတူဖော်ထုတ် 162012-Methoxy-72-hydroxyquinazolin-8-One, 2-arylbenzothiazoles အခြေစိုက် kinase inhibitor အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုဓာတုကျွမ်းကျင်သူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်, သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုလူတစ်ဦး၏တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အသားအရေနှင့်မျက်စိယားယံခြင်းမှအစာခြေကျေးရွာအုပ်စုများ၏ယားယံအထိပြဿနာတွေရဲ့ array, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, Quinazoline-မိသားစုဝင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နေဆဲ။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကရှိခဲ့သည်အဖြစ် 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-တ Quinazoline ပိုင်ညွှန်ပြ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင် Quinazoline အကြောင်းပိုမိုသိမလုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်? အခြေခံအားဖြင့် Quinazolines အလားအလာရေဒီယိုအထိခိုက်မခံအဖြစ်ဤအရပ်မှတစ်ဦးအလားအလာအနာဂတ် Anti-ကင်ဆာဂုဏ်သတ္တိများကိုဆောင်သောတစ် heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများကိုရညျညှနျး။ ကြောင်းဖြစ်ပျက်စေရန်ကြိုးပမ်းအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသုတေသနရှိပါတယ်။
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One ဓာတု isC9H8N2O3 ၏မော်လီကျူးပုံသေနည်းက၎င်း၏မော်လီကျူးအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့် Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသီးသီး 192.17142 နှင့် 192.05349213 ဖြစ်ကြ၏နေစဉ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ထုတ်ကုန် Off-whitepowder သို့မဟုတ်တုံး၏ပုံစံအတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးစစ်မှန်နီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဖန်ပုလင်းထဲမှာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် 192.174g / mol တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိပါတယ်လာသည်။ သင်ကအရည်ပျော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အပူအကြောင်းကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်၎င်း၏အရည်ပျော်မှတ်တစ်နေရာရာမှာ between220 313 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One (162012-72-8) ၏တွက်ချက်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်
XLogP3-AA ကို 0.3
Monoisotopic Mass 192.053 g / mol
အတိအကျ Mass 192.053 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 70.9 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADccBzMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
မော်လီကျူးအလေးချိန် 192.174 g / mol
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One Synthesis လမ်းကြောင်း
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-တ Synthesis လမ်းကြောင်းအကြံပြု
အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်လုံးချင်း: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသားအရေသို့မဟုတ်သင့်မျက်စိနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာဖွစျစေ, 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One မျက်စိသို့မဟုတ်အရေပြားရှိမရှိ, အပါဝင်ပတ်သက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရန်အလေးအနက်ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ကနှင့်အတူမည်သည့်တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တားဆီး, သင်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။
ရှူရှိုက်မိပါသင့်ရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကတခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလက၎င်း၏ပုံစံ (ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်မှုန်ရေမွှား) ၏ကရှိပါတယ်သကဲ့သို့, ဓာတုဓာတ်များကိုရှောင်ရှားရန်အဖြစ်အများကြီးသင်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပါ။ အထူးသ, ကသင့်ရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကစိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်။
မျို:အလွန်အဆိပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ဒီထုတ်ကုန်ပင်၎င်း၏ tiniest ခြေရာတွေအတွက်, ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်မျိုချမိမရသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အစာခြေလမ်းကြောင်းမှယားယံစေနိုင်ပါတယ်။
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One (162012-72-8) ပထမဦးဆုံးအကူအညီအစီအမံ
သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦး, inhales မျိုဒါမှမဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျှင်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့အရေးကြီးသောပထမဦးဆုံးအကူအညီအစီအမံရှိပါတယ်:
ရှူရှိုက်မိပါဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ပြင်, ရှူရှိုက်မိ၏အမှု၌, သားကောင်ကိုသွားသင့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာမှခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ ထို့နောက်သူသည်အငြိမ့်ကသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အသက်ရှုကူညီပေးပါမည်တဲ့အနေအထားတွင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းအားနည်းခဲ့လျှင်, တစ်စုံတစ်ဦးကသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကူညီသင့်ပါတယ်။
အရေပြားအဆက်အသွယ်:သင့်ရဲ့အသားအရေထုတ်ကုန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သို့ကြွလာမကောင်းတဲ့မရှိခြင်းအားဖြင့်ဆိုပါက, သင်ဆပ်ပြာနဲ့ရေအများကြီးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤ (ထပ်မံ) ယားယံမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်, သင့်အသားအရေကနေအများဆုံးဓာတုဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်။
စားသုံးမိပါ:အမှု၌တစ်စုံတစ်ဦးကဒီထုတ်ကုန်မျိုမှဖြစ်ပျက်, သူသို့မဟုတ်သူမသေချာစွာသန့်ရှင်းသောရေကိုအသုံးပြုပြီးသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပါးစပ်သုတ်ရန်အကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ယားယံတားဆီးသို့မဟုတ်လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
မျက်လုံးချင်း:ထုတ်ကုန်သင်၏မျက်စိသို့ရရှိသွားတဲ့လျှင်, သင်ကအနည်းဆုံး 15 မိနစ်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူသူတို့ကိုရှင်းလင်းရန်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျအားလုံးမဟုတ်လျှင်ဓာတု၏လမ်းအများဆုံးရုတ်သိမ်းပေးရန်သူတို့ကိုရှင်းလင်းရန်အဖြစ်မှန်မှန်သင်၏မျက်စိရုတ်သိမ်းပေးရန်။
ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အထက်ပါပထမဦးဆုံးအကူအညီအစီအမံပြည့်စုံကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်စိယားယံဆက်ရှိနေသေးသို့မဟုတ်အရေပြားယားယံခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကသားကောင် soonest ဖြစ်နိုင်သောဆရာဝန်တစ်ဦးသွားရောက်ကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်။
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One (162012-72-8) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အကာအကွယ်ဝတ်ဆင်ဝတ်ဆင်: 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One ကိုင်တွယ်စဉ်လက်အိတ်၏တစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ဦးဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးနေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးပုလက်အိတ်ဓာတုနှင့်အတူအသားအရေအဆက်အသွယ်ရှောငျလှဲပေးလိမျ့မညျစဉ်ကဓာတ်များကနေသင်တို့ကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်အိတ်ရုံဆိုကျပန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့်မာခ် 374 စံနှင့်အီးယူညွှန်ကြားချက် 89 / 686 / EEC ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောသူတို့အားမပေးသင့်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်သမျှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ဓာတု၏ spillage ကာကွယ်တားဆီးဖို့သလောက်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကြိုးစားပါ
တာဝန်သိအကာအကွယ် wear ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး: သင်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်များမှာပြီးတာနဲ့သင်သည်သူတို့၏မျက်နှာပြင်များပေါ်မှာအရာသည်၎င်း၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိစေပါဘူးတဲ့ထုံးစံအတွက်လက်အိတ်နှင့်မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ တိုတိုထဲမှာ, လက်အိတ်များနှင့်ရှင်းလင်းသောအသားအရေနှင့်အတူမျက်နှာဖုံးများ၏ပြင်ပမျက်နှာပြင်ကိုထိရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျီပုအသုံးပြုသောအကာအကွယ်မဖယ်ရှားပြီးနောက်သင့်လျော်သောဓာတ်ခွဲခန်းအလေ့အကျင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းများ / ဥပဒေများနှင့်အညီသူတို့ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
သင်၏လက်ကိုဆေးကြော: သင်အသုံးပြုပြီးနောက်လက်အိတ်နှင့်မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြတခါသင်၏လက်ထုတ်ကုန်ကနေလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး, သငျသညျ၎င်းငျး၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အန္တရာယ်မှာမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့ဖြစ်စေရန်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ဆပ်ပြာနှင့်သင်၏လက်၌ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက်သင်၏လက်အခြောက်နှင့်အသင်ပြုချင်သည်အခြားသမျှသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
, သောက်စရာသို့မဟုတ်မီးခိုးမစားပါနဲ့: ကကိုင်တွယ်နေစဉ်ဓာတု ingesting ရှောင်ရှားရန်, သင်စားခြင်း, သောက်ခြင်း, ဆေးလိပ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ မျိုလျှင်ထုတ်ကုန်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်, သင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်ဖို့ကြဘူးမလိုချင်သလဲ? ဒီနေရာမှာအကြံပေးအဖြစ်ထိုအခါစောင့်ရှောက်မှုယူပါ။
ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားချွတ် ယူ. ပြန်သုံးမတိုင်မီဆေးကြောပါ။
သင်ထုတ်ကုန်အသုံးမပြုတဲ့အခါ, တင်းကျပ်စွာက၎င်း၏ပုလင်းကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောလေဝင်လေထွက်နှင့်အတူတစ်ဦး, အေးမြခြောက်သွေ့သော့ခတ်-up, အရပျ၌သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
သင်ဓာတုသို့မဟုတ်၎င်း၏ကွန်တိန်နာဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးလိုပါကဒေသခံစည်းမျဉ်း (s) ကိုအတိုင်းလုပ်ပါ။
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-One (162012-72-8 သတိပေး
ကြှနျုပျတို့သညျဤ site ပေါ်တွင်ရှိပေးအပ်ထားသောအချက်အလက်များဥရောပသမဂ္ဂ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (အီးယူ) ကိုလိုက်နာရမည်။ ကထုတ်ဝေခဲ့သည့်ရက်စွဲမှာအဖြစ်အပြင်သတင်းအချက်အလက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်, အသိပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အညီသစ္စာဝါဒီများနှင့်တိကျမှုပါပဲ။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များသီးသန့်လုံခြုံစိတ်ချစွာကိုင်တွယ်အသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုထုတ်ကုန်၏အသုံးပြုသူများသည်ကိုလမ်းပြဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ကဲ့သို့သောများတွင်သတင်းအချက်အလက်တစ်ဦးအာမခံမဟုတ်သလိုအရည်အသွေးကိုသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်ကုသထားရမည်မဟုတ်။
Apicmo အခြားသူတွေအကြား, Chromatography, ဘဝကသိပ္ပံ, ဓာတု Synthesis နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံအပါအဝင်ပြည့်စုံသုတေသနအသိပညာနှင့်အတူထိပ်တန်းမုန့်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဖွဲ့သည်ပါတယ်။
6-Bromoquinazolin-2 (1H) အမြောက်အများသာသနာကိုနှင့်စျေးနှုန်း -one
အမြောက်အများအတွက် 6-Bromoquinazolin-2 (1H) -one ယခုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အမိန့်ချထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းများများမှာမည်မျှအိတ်ကပ်-ဖော်ရွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အမင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဖော်ရွေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုထံမှထွက်ရှာတွေ့မှကိုသင်အံ့သြပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသုတေသနသို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်နှင့်အကောင်းဆုံးအခြေအနေသင့်ရဲ့အမိန့်ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းသေချာစေရန်ရလိမ့်မည်။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်အမျိုးသားရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-တကဏ္ဍများ 1-9 ။
2 ။ အလန် R. Katritzky, Heterocyclic ဓာတုဗေဒ, စာမျက်နှာအတွက် 2011 -Advances 302
3 ။ WLF Armarego, 2009 ဖျူး Pyrimidines, စာမျက်နှာ 532
Harris က, Craig က S .; ရေနွေးအိုး, ယာသုန်, G .; Williams ဟာ, အမ်မာဂျေ Tetrahedron ပေးစာ, 2005, vol ။ 46, # 43 စ။ 7381 - 7384